Google mandefa ny Google Tag Manager | Martech Zone
Raha efa niasa tamina tranokala mpanjifa ianao ary tsy maintsy nanampy kaody fiovam-po avy amin'ny Adwords ho lasa maodely fa rehefa naseho tamin'ny mason-tsivana sasany io modely io dia fantatrao ny aretin'andin'ny pejy fanoratana!
Ny tag dia sombin-kaody bitika kely ao amin'ny tranonkala izay afaka manampy amin'ny fanomezana fomba fijery mahasoa, nefa mety hiteraka fanamby ihany koa. Ny tags marobe dia mety hahatonga ny tranokala ho miadana sy ho maloto; ny tags tsy diso dia mety manodina ny fandrefesanao; ary mety handany fotoana be ho an'ny departemanta IT na ekipa webmaster ny manampy tag vaovao — mitarika amin'ny fotoana very, data very ary fiovam-po very.
Androany, nanambara i Google Google Tag Manager. Ity dia fitaovana iray izay hanamora ny fanaovana tagging pejy ho an'ny rehetra!
Google Tag Manager dia manasongadina izay voatanisa ao amin'ny tranonkalany:
Hakingam-barotra - Afaka mandefa tag vaovao ianao amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Midika izany fa eo am-pelatananao ihany ny programa fanaovana dokam-barotra ary misy programa hafa atosika data; tsy misy herinandro miandry (na volana) intsony ny fanavaozana ny kaody tranokala — ary ny tsy fahombiazan'ny marketing sy ny varotra ilaina amin'izany.
Data azo ianteherana - Ny fanamarinana hadisoana mora ampiasaina an'ny Google Tag Manager ary ny famoahana ny tag haingana dia midika fa ho fantatrao foana fa mandeha ny tag rehetra. Ny fahaizana manangona angona azo antoka avy amin'ny tranokalanao manontolo sy ny fonenanao rehetra dia midika fanapahan-kevitra bebe kokoa sy fanatanterahana fanentanana tsara kokoa.
Mandeha haingana sy mora - Google Tag Manager dia mailaka, mailaka ary natao hamela ny mpivarotra hanisy na hanova tag isaky ny maniry izy ireo, sady manome toky an'ireo mpiara-miasa aminy amin'ny IT sy webmaster fa mandeha tsara ny tranokala - ary mamaky haingana — hany ka tsy avela mihantona ny mpampiasa anao .
Tags: Google tenifototra mpitantanaGoogle +tenifototratag managertaggingTags
3 Oktobra 2012 à 3:30
Mbola tsy nanandrana an'ity aho fa vao avy nandre izany taminao. Misaotra amin'ny fanondroana an'ity, manamora ny fametahana ny pejy isaky ny pejy. Mamoaka plug-in ao amin'ny WordPress koa ve izy ireo amin'ny fametahana?
3 Okt 2012 amin'ny 5:03 PM
Mbola tsy nahita na iray aza aho, @disqus_FHwBYQKmUU:disqus fa tsy ho ela ny hamolavola azy!